Fanamboarana fotodrafitrasa ::Sinoa valo amby telopolo avy any Etiopia hanao ny kianja Barea • AoRaha
Fanamboarana fotodrafitrasa Sinoa valo amby telopolo avy any Etiopia hanao ny kianja Barea
Nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, omaly tamin’ny 2 ora tolakandro, ireo Sinoa lahy valo amby telopolo niaraka tamin’ny sidina Etiopian Airlines, avy any Addis Abeba (Etiopia). “Hanampy amin’ny fanamboarana ny kianjaben’i Mahamasina izy ireo”, araka ny nambaran’ny mpandika teny nitsena azy ireo teny Ivato. Nivantana avy hatrany teny Mahamasina ireto Sinoa vao tonga ireto.
“Efa niatrika ny fitokana-monina tany Addis Abeba (Etiopia) izy ireo ary salama tsara avokoa. Manana taratasy avy amin’ny dokotera tany an-toerana izy rehetra manamarina ny fitokana-monina nataony. Na izany aza anefa, mbola arahi-maso hatrany eny amin’ny trano ipetrahany ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny fahasalaman’ireto Sinoa vao tonga ireto”, araka ny nambaran’ny mpitsabo nitsapa ny hafanan’izy ireo teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, teo am-pahatongavana.
Fanao amin’ireo vahiny vao tonga avy any amin’ireo firenena efa misy an’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” ny fampitokana-monina. “Tsy hijerena tavan’olona io fanokana-monina io fa ampiharina amin’ny rehetra”, hoy hatrany ity mpitsabo ity.
Araka ny loharanom-baovao dia ireto vao tonga omaly ireto no sinoa faramparany hanenjika ny asa fanamboarana ny “tribune” hanenjehana ny fankalazana ny faha-60 taona nahazoan’i Madagasikara ny Fahaleovantena.
Nikatona, omaly tamin’ny 12 ora alina, rahateo ny sidina mampitohy antsika amin’ireo firenena rehetra, araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana malagasy hiarovana ny vahoaka amin’ny valanaretina “Coronavirus”.
Baolina kitra – Can sy mondial Mila mivonona hatrany ny Barea
Adi-hevitra mikasika ny lisi-pifidianana :: Tototry ny fanakianan’ireo mpivory tonga tetsy Alarobia ny Ceni
Fandikana ny baikom-panjakana :: Fiangonana maro nakaton’ ny mpitandro ny filaminana